I-Ark of the Covenant eyisimangaliso isongelwa yizingxabano zase-Ethiopia | Scrolla Izindaba
I-Ark of the Covenant eyisimangaliso isongelwa yizingxabano zase-Ethiopia
Amagugu ezenkolo atholakala esifundeni sase-Tigray se-Ethiopia asengcupheni yokubhujiswa njengoba impi yombango yalelizwe indlondlobala.
I-Ark of the Covenant ayikaze ibonwe ngamehlo ngabantu izinkulungwane zeminyaka, futhi indawo ekuyo ayiqinisekisiwe. Kodwa kuthiwa igcinwa e-The Church of Our Lady Mary of Zion e-Aksum, esifundeni sase-Tigray eNyakatho ne-Ethiopia.
Leli bandla kubikwa ukuthi liyisizinda sesibhicongo sakamuva sabantu abangaphezu kubangama-750, ngokusho kwezakhamizi ebezibaleka.
Iningi lofakazi lithe leli bandla lahlaselwa, kwakhishwa abantu abangamakhulu badutshulwa, ukuze le-Ark of the Covenant intshontshwe bese iyiswa e-Addis Ababa, inhlokodolobha yase-Ethiopia.
Umbango ubukhula ngesivinini esikhulu kusukela ngoLwezi, lapho umholi wezwe, u-Abiy Ahmed, ethumela amabutho empi ukuba ayohlasela i-Tigray People’s Liberation Front (i-TPLF), enombutho wayo wezempi.
Undunankulu usole i-TPLF ngokuzama ukunyakazisa izwe nokubamba ukhetho olungekho emthethweni.
Amasosha avela e-Eritrea nawo awele umngcele ayohlanganyela kanye namabutho ka-Ahmed ukuyolwa nama-Tigreans.
Ochwepheshe basheshe bavuma ukuthi inani lempilo yomuntu kumele libekwe phambili kunokuvikelwa kobuciko bomlando, njengoba izinkulungwane zabantu sezivele zibulewe empini.
Ngaphezu kwalokho, i-UN ibike ukuthi bangaphezu kwabayi-21,000 ababalekile bewela umngcele baya e-Sudan.
Kodwa-ke, lezi zindawo zamagugu amasiko ziphethe uhlobo oluthile lokubaluleka.
U-Alison Phipps, uprofesa wezilimi nezifundo zamasiko e-Glasgow University, utshele iphephandaba i- The Guardian ukuthi “lezi zingosi zingcwele futhi zibaluleke kakhulu emlandweni wobuKristu nasekuthuthukisweni kwazo e-Ethiopia.”
Kanye ne-Ark of the Covenant, isigodlo sasendulo sase-Debre Demo kubikwa ukuthi sonakalisiwe futhi saphangwa.
Ngokwengeziwe, imibhalo yesandla engenakubalwa, imidwebo, izithombe ezibaziwe nezinye izinto zobuciko, ezisakazeke kuyo yonke i-Tigray, isengozini yokulahleka noma yokuqothulwa.